GEEDKA "GLORY TO VICTIM": SHARAX, BEERID IYO DARYEEL - GEED GEEDEEDKA
Sida loo koro geedka tufaaxa "Glory to the Winners": faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan
Waa adag tahay in la qiyaaso ugu yaraan hal beer oo geedo tufaax ah aysan korin karin. Haddii aad rabto inaad beerta beerta oo aad raadiso macluumaad ku saabsan geedo midho leh oo aan qabyo ahayn, markaa waxaan kugula talinaynaa inaad tixgelisid ikhtiyaarka ah inaad ku beeri kartid geedka tufaaxa ah, "Mahadnaq Dhibbanayaasha." Kala duwan Tani waa fond of beerta hiwaayadda hiwaayadda. Waa maxay sababta Akhri hoosta ku saabsan sifooyinka beerashada tufaaxa "Glory to Victim", sharaxaadda kala duwan, sidoo kale faa'iidooyinka ugu muhiimsan iyo faa'iido darrada.
Dhirta Apple "Glory to Victors": sharaxaadda noocyada kala duwan
Tufaaxa "Dhamaan Dhibbanayaasha" ku dhaco laba qaybood: xagaaga ama xagaaga dambe noocyo, dabeecaddani waxay ku xirnaan doontaa meesha koritaanka geedku. Geedkan tufaaxani waa mid aad u dheer, taajirkiisu waa ballaaran-Giraan leh oo leh awood sare oo dib u dhis ah.
Baro naftaada noocyada kale ee tufaaxa ee tufaaxa kale: Rozhdestvenskoe, Ural Bulk, Krasa Sverdlovsk, Orlinka, Orlovim, Zvezdochka, Kandil Orlovsky, Ekranennaya, Antey, Antonovka , "Uralets", "Pepin saffron", "Madaxweyne", "Champion", "Bashkir Beauty", "Berkutovskoe".
Geedaha yaryar, laanaha ugu muhiimsan waxay koraan si toos ah, xagal fiiqan, dariiqyada ayaa kor loo qaadayo. In dalagyada miraha baaluq badan, waxay u cararaan dhinacyada, sameynta wheelworms iyo canjuud miro. Warshad qaangaar ah ayaa gaareysa dherer ahaan 2.5-3.5 m.
Caleenta geedaha tufaaxa kuwan waa cagaar cagaaran oo leh jilcil huruud ah, oo ku wareegsan qaabka iyo siman. Geedka aadka u qurxoon wuxuu u egyahay xilliga ubaxa. Ubaxyada ubaxu waxay ku badan yihiin casaan, midabkuna waa casaan.
Ma taqaanaa? Apple "Glory to Victims" wuxuu u muuqday natiijo ah noocyo kala duwan oo "Mac" iyo "Papirovka". Sanadka Noqoshada - 1928. Breeders Lev Ro iyo Pavel Tsekhmistrenko waxay keeneen beerta beerta Mlievsky iyo xarunta tijaabinta beerta. L. Michurina (maanta - L. P. Simirenko Institute of Pomology, Akademiyada Qaranka ee sayniska beeraha (Ukraine).
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee tufaaxa "Glory to the Winners" waxaa ka mid ah miro qurux badan oo macaan. Kala duwanaantani waxay ku wareegsan yihiin wareegsan, qaabaysan oo qaabaysan, waxaa laga helaa qallafsanaanta qaybta sare, aan lafdhabar lahayn. Baaxadda - weyn iyo dhexdhexaad ah, miisaanka hal mar ayaa gaarey 125-180 g.
Si dhadhan - macaan iyo dhanaan, dhexdhexaad ah. Midabka miro ayaa cagaar cawl leh oo leh casaan cas ama midab madow. Jirka waa iftiin huruud ah, shimbir, maqaarku waa siman yahay. Sababtoo ah midabka, casiirka iyo carafka tufaaxa ee "Glory to Victims" kala duwan ayaa dalbanaya beeralayda, dadka caadiga ah ee suuqyada iyo dukaamada.
Beergooyska ayaa soo kordhay dhammaadkii Agoosto - horraantii Sebtembar. Marka ugu horeysa waa joogto, ka dib, iyada oo ku xidhan gobolka ee koritaanka, xaddiga ayaa la dhigay. Kala duwanaanshahan waxaa lagu gartaa heer sare iyo heer dhexdhexaad ah: geed 7-8-sano jir ah wuxuu soo saaraa 10-18 kg oo tufaax ah, geed 13-14 jir ah oo tufaax ah - 40-75 kg.
Waa muhiim! Tan iyo markii geedo tufaax ah "Glory to Victors" ay yihiin iskood u-shaqeyn (oo ka dhalatay is-pollin, kaliya 4-8% midhaha ayaa la xiraa), waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero geedaha nadiifinta agagaarka. Noocyo kale oo geedo tufaax ah, tusaale ahaan, Antonovka, Borovinka, Melba, Priam, Vadimovka, waxay ka caawineysaa pollinalinta.
Tixgeli faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka "Amaanta Waalidka". Faa'iidooyinka ugu weyn waxaa ka mid ah:
caabbinta barafka sare;
Iskudhin dhexdhexaad ah oo ah caarada budada iyo qolofta;
tayada sare iyo gaadiidka, raaxeysiga iyo soo jiidashada midhaha;
marxalad wanaagsan ee Bisaylkiisa (marka noocyo hore hore u otlodnosili, iyo dayrta - kaliya at heerka of koriinkedu).
Iyada oo la beero habboon iyo daryeel haboon, geedka tufaaxu wuxuu qaadi doonaa miraha ugu horreeya sannadka labaad ee nolosha. Laga soo bilaabo saddex sano, waxay bilaabi doontaa in la soo saaro dalag goos goos ah oo buuxa Inkasta oo ay u qalantaa in la ogaado in tirooyinkani ay ku kala duwan yihiin hadba meesha uu kobcayo. Celcelis ahaan, fruiting bilaabmaa 5-6 sano ka dib markii laga beerto.
Faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan ayaa la tirin karaa:
dulqaad la'aanta saboolnimada;
dhajinta dhaadheer ee adag oo culus (taas oo u baahan taxadar dheeraad ah markay baxayso);
Haysashada yar ee miro bislaaday geedaha;
nolol maalmeedka gaaban ee miraha (3-4 bilood ee qaboojiyaha, 1-1.5 bilood Maqsin);
Sida loo aasayo geedka tufaaxa
Si loo gaaro ka goosashada wanaagsan ee geedka tufaaxa mustaqbalka dhow, waxaa lagama maarmaan ah in la daryeelo xulashada meel loo beerayo geedka iyo halabuurka carrada.
Halka geedka tufaaxu uu kori doono kan ugu wanaagsan, doorashada meel geed
Geedka Apple - geedo fududSidaa darteed, marka aad dooranayso goob degitaankeeda, arrintan waa in marka hore la tixgeliyaa.
Ma taqaanaa? Miraha way ku kala duwan yihiin midabka iyada oo ku xiran hadba inta ay iftiimiso. Sidaa darteed, tufaaxa leh dhinac yar oo casaan ah ayaa ku dhasha geedo tufaax ah, kuwaas oo inta badan ku yaal hooska. Wixii geedo koraan inta badan qorraxda, miraha ayaa si buuxda u noqon doona midab leh casaan-gaduud.
Marka lagu daro, marka geedo lagu qulqulayo, waxaa suurtagal ah in la yareeyo sonkorta sonkorta tufaaxa iyo hoos u dhaca dhalmada. "Wanaagga Ku Guuleystayaasha" sidoo kale ma jecla biyaha taagan. Sidaa darteed, haddii beertaada ay jirto daadad, noocyada noocan ah waa in lagu beeray ciidda leh dheecaan ama sare u qaadid. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hubiso heerka biyaha dhulka, waa inaanay ka sarraynin 2-2.5m.
Xulashada carrada ee noocyo tufaax ah "Sharaf u leh guuleystayaasha"
Wixii beerashada dhajiska tufaaxa iyo carrada carrada leh ee leh kiimiko dhexdhexaad ah (pH 5.6-6.0) waxay ku haboon yihiin. Haddii aad qorsheyneyso in aad ku beeri miro this on carrada ciidda, ka dibna tan waa suurtagal ah bacriminta joogto ah.
Qorshaha beeritaanka geedo tufaax ah
Dhirta Apple "Glory to the Winners" waxaa lagu beeray xilliga dayrta iyo guga, iyo ka dib markii aad dooratid meel ay ku beeri geedka, waxaad u baahan tahay inaad ka qayb gasho doorashada geedo tayo sare leh. Waxaa jira shuruudo badan oo loogu talagalay: waa in ay leeyihiin nidaam xidid badan oo nool, tallaal qalalan, jilif adag oo aan joogto ahayn.
Heerka loo baahan yahay ee seedling waa 1.5 m. Waa in sidoo kale leeyihiin dhowr laamood. Waxaa fiican in la doorto geedo laba sano jir ah - geedka ka soo baxa wuxuu bilaabi doonaa in uu midho u dhalo horaantii. Laga soo bilaabo dhirta in la beeray dayrta, caleemaha oo dhan waa la saaraa. Sidoo kale waxaa la nadiifiyey 90% caleenta geedo ku yaala geedo dabiici ah.
Sida caadiga ah geedo waxaa lagu iibiyaa xididada furan ama ubaxyo. Halkan doorashadaada waxay ku xiran tahay sida ugu dhakhsaha badan ee aad qorsheyneyso inaad u deyso. Haddii aan isla markiiba, waxaa fiican inaad doorato ikhtiyaarka dheriga.
Daloolka soo degayaa horay loo diyaariyey - ugu yaraan todobo maalmood ka hor. Xaqiiqooyin Fiican: ballac iyo dherer - 70 cm; qoto dheer - 1 m (iyadoo ku xiran dhererka nidaamka xididka). Dhinaca koonfureed waxaad geli kartaa saamiga garters ah ee warshad dhalinyaro ah.
Ciidda khudradda leh Bacriminta dabiiciga ah ayaa lagu shubay hoose ee godadka, iyo ash ama humus ayaa sidoo kale lagu dari karaa. Geedka abuurista si tartiib ah ayaa loo wareejiyaa bartamaha godka, gacanta oo fidiya xididada iyo daboolay ciidda, hubinta in xididada aan la leexin iyo qoorta xididka ka baxsan 5-7 cm dhulka.
Waa muhiim! Markaad geedo tufaax ah ka sameysid weel, ma aha muhiim in la burburiyo qolka dhulka. Sidaa awgeed dhirta ayaa si dhakhso ah u qaadan doonta galka furan.
Galka si khafiif ah u tamped. Geedka tufaaxa cusub ee loo beeray waa in la waraabiyaa adoo isticmaalaya baaldi biyo ah. Waxaad isticmaali kartaa mulching - caws engegan, peat ama humus. Haddii dhowr geed oo la beeray, markaa masaafada u dhexaysa geedo waa inay ahaataa ugu yaraan 4 m, inta u dhaxeysa saf - 3 m.
Sida loo daryeelo geedka tufaaxa
Warshad dhallinyaro ah ilaa saddex sano waxay u baahan tahay waraabin joogto ah iyo burburin aagga asalka ah ee haramaha. Dhirta waawayn iyo kuwa xoog badan ayaa sidoo kale u baahan doona dabcinta ciidda, bacriminta, manjooyin, daaweyn ka hortag ah cayayaanka iyo cudurada.
Inkasta oo ay "Dhawrsan tahay Dhibbanayaasha" si fudud u dulqaadi kara abaaro aan weligood joogin, waxaa muhiim ah in laga hortago in dalka laga qallajiyo. Sannadka kowaad, geedka tufaaxa ayaa la waraabiyaa 3-4 jeer 30-40 liitar halkii foosto. Inta lagu jiro xilliga qalalan, geedka waa in la waraabiyaa 5-6 jeer xilli ciyaareed, iyadoo la isticmaalayo 30-50 litir oo biyo ah halkii foosto. U hubso inaad qoyso ciidda:
inta lagu jiro ubax;
kahor dhismaha ugxansidaha;
15-20 maalmood ka hor inta Bisaylkiisa buuxa.
Waraabinta waa in la joojiyaa bisha Agoosto si ay u oggolaato geedka tufaaxa inuu u diyaargaroobo jiilaalka iyo in aan la daalin jardiinka miraha.
Dharka ugu sarreeya iyo daryeelka carrada
In geedku si wanaagsan u koraa oo uu midho u dhasho waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u bacrimiyaan. Bacriminta nitrogen ugu horeysay ayaa lagu dabaqi karaa badhtamaha bisha May ee sannadka ugu horreeya ee nolosha (3 kg of ammonium nitrate / 1 weel, 5 kg of ammonium sulfate / 1 weel).
Labiska labaad waxaa la fuliyaa badhtamaha Juun. Haddii sanadka ugu horreeya ee sapling si dhakhso ah u koraa, ka dibna sanadka soo socda waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo kaliya hal quudin dheeraad ah - bilowga May. Si kor loogu qaado bacriminta, hirgelinta nitrogen waa la yareeyey.
Dharka ugu sarreeya ee leh fosfooraska iyo milixda potassium ayaa lagu sameeyaa grooves leh qoto dheer oo ah 40 cm hareeraha wareegga garabka. Sidoo kale isticmaal bacriminta organic sida foomka digada iyo compost.
Si looga hortago cudurada sanadaha hore, geedka tufaaxa waa in la buufiyaa. Daaweynta kiimikada waxaa lagu sameeyaa isla markiiba ka dib markii ubax (waxaad isticmaali kartaa isku dar ah "Aktara" iyo "Horus"), inta lagu guda jiro muddada geedka ("Angio" iyo "Horus").
Daryeelidda ciidda waxay ka kooban tahay mudnaanta si loo daboolo jirridda geedka (daruuri ka dib markii waraabiyo), ay ka saarto haramaha, qodaya dhulka ka hor bilawga ah ee barafka iyo mulching leh humus, peat, compost.
Dhirta yaryar waxay sameeyaan taajkii loo baahan yahay sanadkiiba. Waxaa la ogaaday in geedo tufaax leh taajka habboon ee qaabaysan ay ku kala duwan yihiin fruiting, baraf badan iyo adkeysi weyn.
Goobab ku habboon ayaa ka caawiya helitaanka dhalid tayada leh. Waxaa la samayn karaa guga ama dayrta. Waxa kale oo muhiim ah in la fuliyo manjooyin cusub oo geedo tufaax ah.
Manjada qaabka ugu horreeya waxaa la fuliyaa sanadka labaad ee nolosha geedka, ka hor bilawga xilli sii kordhaya. Halkan waa inaad aad u taxadartaa inaadan jarin laanta miraha ah.
U hubso inaad ka saarto caleemaha toosan ee seedling - tani ma ogolaan doonto in geedku si dhakhso ah u koraan dhererka wuxuuna kicin doonaa dhismaha caleemaha dhinaca. Guga, koritaanka sannadkii hore ee laamaha waa la jaraa 1/3. Laamaha hoose, gaar ahaan kuwa dhulka ku jiifa, waxay ku xiran yihiin manjooyin khasab ah. Waxa kale oo loo baahan yahay in la yareeyo ugxan iyo midho.
Kala saarista noocyada tufaaxa "Glory to Victim"
Si dib loogu noolaado geedka tufaaxa ama badbaadinta noocyo badan oo dhimasho ah, bannaanka marba wakhtigaa waa in ay la tacaalaan dhalashada dhirta. Dhirta geedku waxay u kobcisaa afar siyood: abuur, jarjar, dhar iyo indho. Aan isku deyino in aan sheegno halista ugu yar iyo kuwa ugu dhibta badan, oo sharaxaya habka mid walba si faahfaahsan.
Waxaa laga yaabaa in ugu dadaal badan oo shaqeynaya habka abuurka, sababtoo ah abuurka waa in lagu rusheeyaa gacanta - si loo wareejiyo manka si ka mid ah geed ilaa mid kale. Sidaa daraadeed, nidaamkani waxaa badanaa lagu sameeyaa jadeecada. Intaa waxaa dheer, habkani inta badan waa mid aan waxtar lahayn markii ugu horeysay.
Way sahlan tahay in la faafiyo guntinta dhirta geedka, taas oo ah mid ku habboon badhtamaha. Goynta jarida waxay dhacdaa Febraayo-Maarso, ka hor bilaabashada saarista casiir, ama dayrta, ka dib markii dhirta ka dib. Waxaa la gooyaa 18-20 cm Dhirta waxaa laga saaraa qaybaha hoose.
Sidoo kale la nadiifiyo caleemaha xad-dhaafka ah. Marka laga beerto, gooynta aan si weyn u daboolay dhulka - by 2-3 cm. Plantings waxaa si joogto ah u waraabiyey iyo mulched leh humus. Xilliga xagaaga, waa in ay koraan geedo heer sare ah oo lagu beddeli karo meel joogto ah.
Si aad u hesho dhajinta waxay u baahan tahay geed yar, taas oo hore loo beeray. Guga, laanta la xidhiidho ama dhulka jiifo, waxaa lagu dhejiyaa dhulka ama waxaa lagu darayaa dhererka dhererka oo dhan. Caleemaha, waa in ay ka soo baxaan burooyinkeeda, waxay u baahan doonaan in ay ku dhuftaan dhowr jeer inta lagu jiro xilliga xagaaga, ka dibna geedo leh xididdada ayaa ka muuqan doona dayrta. Guga soo socda, waa la gooyaa oo lagu beeray dhul furan meel joogto ah.
Si aad u hesho qashinka geedaha tufaaxa dadka qaangaarka, isticmaal habka hawada ee hawada. Habkani wuxuu ka yar yahay shaqada oo dhan marka loo eego kuwa kale. Loogu kobciyey, laamo badan oo soo korayo ayaa loo doortaa. Meel fog oo ah 10 cm xagga sare ee laanta, giraanta barafka ah ee 3 cm ballaaran ayaa la gooyaa, ama jeex qafiif ah ayaa lagu sameeyaa wareegga idil.
Meeshan waxaa lagu daaweeyaa daroogada si loogu kobciyo abuurka, tusaale ahaan, "Kornevin". Ka dibna ku duub dhoobada iyo duub balaastig ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa dhalada balaastigga ah ee la isku qurxiyo oo leh walxo ciid ah kaas oo si fiican loogu hagaajin karo biiyaha. Xilliga dayrta, seedling leh xididada waa in laga koray meel khasaare ah, taas oo ah in laga gooyo geedkii hooyada oo lagu dhex daro hoyga gabbaadka loogu talagalay jiilaalka.
Markaad laabato indhaha oo ku yaal jilifka rootstock oo leh mindi, jeexitaan T-shaped ah ayaa la sameeyaa. Cidhifyada jilifku waxay u jeedaan dhinacyada ilaa ay alwaaxdu soo baxdo. Qeybta laga jaray gooynta kala duwan ee la jarjaray ayaa la geliyaa jeexitaanka, kaas oo kelyaha leh qayb ka mid ah jilif iyo petiole 1.5 cm dheer ah ayaa ku yaala. Qaybaha cufan ee jilifka ayaa si xoog leh loogu cadaadiyaa ka jarista goynta waxayna ku daboolaysaa kaadida qoyan. Isla mar ahaantaana, kelyaha waa inuu furan yahay.
Nidaamkani si fiican ayaa loo qabtaa. subaxda ama fiidkii ee hawada qalalan ee qalalan. Laba toddobaad kadib, hubso in isha lagu qabtay. Haddii ay tahay mid cusub oo cagaaran midabka, ka dibna habsocodka ayaa ku guulaystay.
Dhirta Apple "Wanaagga Dhibbanayaasha": diyaarinta jiilaalka
Inkasta oo geedka tufaaxa ah ee noocyada kala duwan ay ka mid yihiin geedaha jiilaalka u adkaysta, waa inay wali diyaar u yihiin jiilaalka. Marka hore, carrada waxaa lagu mulched goobada ku dhow-bar. Tan waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo humus faras (5 cm lakab) ama peat.
Sidoo kale, caleenta geedaha, gaar ahaan da 'yar (ilaa 5 sano), waa in laga ilaaliyo jiirka iyo cayayaanka. Ujeedadaas awgeed, nacnac, nets qaas ah, laamaha dabka, iyo qalabka kale ee u oggolaanaya qoyaanka iyo hawada ayaa loo isticmaalaa.
Haddii aad maamusho geedka tufaaxa, "Glory to Victors", ka dib talooyinka ku saabsan beerashada iyo daryeelka, waxay kugu farxi doontaa sanado badan oo leh wax soo saarka cufan ee casiir leh oo tufaax ah. Miraha ay ku habboon yihiin ma aha oo kaliya foomka cusub, laakiin sidoo kale in foomka wax laga sameeyey - ee foomka of macaanka, compote, casiir, macaanka.